Understanding A Quick in Video riixo - sababta, MARKA & sida loo.
pression waxaa sidoo kale loo yaqaan data riixo, il sireed (macnaha rasmiga ah) ama habka hoos u yara sicirka. Riixo A ayaa loo baahan yahay si loo yareeyo tirada file dhex Deji habab in midkood noqon kartaa lossy ama sameecadda ah. Tayada file ouput video uu yahay mid aad u badan ku xidhan tahay habka riixo ama riixo Video geynta .
Lossy vs sameecadda riixo
Maxaad u baahan tahay in cadaadin?
Marka waa lagama maarmaan riixo?
8 Video riixo Software
Tiraa macluumaadka aan loo baahneyn iyo tirtirka sida macluumaadka waxaa loo arkaa mid la aqbali karo
Macluumaad tirtiray waa laga bogsoon
Tusaalooyin ka mid ah qaabab file lossy waa MKV iyo wmv
Tiraa eryis tirakoobka marayo hab Deji hufan
Waxaa suurto gal ah in laaban in ay gobolka asalka
Tusaalooyin ka mid ah qaabab ifle sameecadda ah waa Zip ama rar files
Natiijadan ayaa kama dambaysta ah ama kuwo la doonayo ee compressing file video yahay si size file waa yar, laakiin tayo badan, ama ganaax u dheeli loo maqli lagu qanci karo. Sababta ugu weyn ee video riixo waa in la yareeyo isticmaalka khayraadka , kuwaas oo awoodda kaydinta xogta bannaan iyo qaadsiiyey. Data storag e ka dhigan tahay xajmiga file (sida waaweyn ama yar yar) halka, xawaaraha dajinta, inaad koombiyuutarka, ama wareejinta furitaanka video ah file waxaa iska leh awoodda la isugu gudbiyo .
Marka la eego haore, waxay qaadan doontaa waqti dheer in la furo iyo Radidiyaha file a video waaweyn marka loo eego ka yar hal. Waxaa sidoo kale jiri doona si dhakhso ah ay u geliyaan rogtid oo aad goobaha bulshada ama u baahan tahay meel lagu kaydiyo yar haddii bixi on PC ama telefoonada gacanta. Waxa kale oo suurtogal in ay la kulmaan arrimaha loo maqli karo haddii aad cadaadin faylasha video ka hor.
Marka aad u baahan tahay in email faylasha video lifaaqa ah
Marka waa u loo maqli on screens yaryar, tusaale ahaan qalabka mobile
Marka waa u saxafiyiinta ama uploading goobo bulsho, tusaale ahaan Facebook ama YouTube
Marka aad leedahay meel lagu kaydiyo xadidan oo rabto inaad si fiican loo isticmaalo waxaa ka mid ah
Marka waa wax gal disc ah indhaha, tusaale ahaan DVD ah
Marka qaab file video ah ma taageersana ama la jaan qaada ciyaaryahanka haatan
Version la casriyeeyay ee Windows Media Coder
Waxay bixisaa ah A / B button la barbardhigo
Hababka aragtida kala duwan la heli karaa
2 3D-DCT riixo Software
Taageerada Ergo siman ku hoos jira xaalad baaxadda hooseeysa
Waxay bixisaa saamiga riixo kala duwan oo tayo leh
Ciyaaryahanka Mini-video waxaa ka mid ahaa
3 Windows Movie Kan sameeyey,
Habka riixo si fufud laakiin tayo sare leh
Dhisay-in editor baaxad leh
Sifooyinka kale ayaa sidoo kale ka mid ah sida DVD gubi
Sidoo kale suurto gal ah in cadaadin files audio
Presets Customized qalabka mobile
Si toos ah ogaadaa dhimaya diinta fiicnayn
5 Stoics Video Converter
Video presets u diinta si toos ah
Waxaa la dhisay-in video clip video editor processing
Ilaali interlaces xitaa marka size jir isbedelay
6 kasta Video Converter
Taageerada qaabab talooyin badan
Waxaa la dhisay-in video online downloader
Halbeegga Gebi customizable iyo fursadaha pre-qeexaa
Xawaaraha diinta Sare oo tayo leh
Taageerada kala duwan oo ka mid ah presets sare dhoofinta
Awoodda si loo badbaadiyo loox shaqsi ama maqal ah
Diinta 30 jeer ka dhakhsi in gebi ahaanba qaab kasta oo
Kala iibsiga Wireless ah ee wax soo saarka files qalabka mobile
> Resource > Video > Video riixo